करोड पर्ने जग्गा अदालत र व्यापारीको ‘सेटिङ’ मा ३५ लाखमा लिलामी : RajdhaniDaily.com sharethis
सयकडा तीन रुपैंया ब्याजले उठायो लक्ष्मीको बास
सिन्धुली । सिन्धुली जिल्ला अदालतले झण्डै एक बर्ष अघि फैसला कार्यान्वयन भन्दै शुक्रबार कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ७ की ६३ बर्षिया लक्ष्मी गुरुङ्गको घरमा ताला लगायो । अदालतले प्रहरी लगाएर उनको घर खाली गरि साहुलाई घर जिम्मा लगाएको हो ।
एकल महिला लक्ष्मी गुरुङको २१ धुर घडेरी, काठको घर र कुखुरा सहितको खोर सबै विपक्षीका नाममा अदालतले पास गरिसकेपछि ताला लगाएको हो । केही बर्ष पहिला घर व्यवहार चलाउन तीन जना महेश भुषाल, चुडा कुमारी गौतम र धनमाया प्रधानसंग ऋण लिएकी लक्ष्मीको घरबास नै उठ्यो ।
कुखुरा बाख्रा र सुँगुर पाल्न सयकडा ३ रुपैंयाका दरले व्याजमा ऋण लिएकी लक्ष्मीले लगाएको लुगा बाहेक सबै गुमाउनु प¥यो । कमाएर जीविका धान्न लिएको ऋणले सडकमा पु-यायो । ऋण लिएको ६ महिनामै ११ लाख रुपैंयाको कागज गराएका साहुहरुले उक्त रकम दोब्बर भएको भन्दै काठको दुई कोठे घर र २१ धुर जग्गा दृष्टि बन्धक पास गराए । लक्ष्मीले ऋण तिर्न नसकेपछि आरती होटलका साहु समेत रहेका भुसाल र अन्य २ जनाले आरती होटलमा लगी एक्लै पारेर २२ लाखको कागज सहित उनको घर जग्गा दृष्टिबन्धक पास गराएका थिए । जब दृष्टि बन्धक पास भयो तीनै जना विपक्षी अदालती प्रक्रियामा गए । र अहिले यो लक्ष्मीलाई घर न घाटको बनाए ।
उनले ऋण सकारात्मक कामका लिएकी थिईन । बाख्रा, सुगुर र कुखुरा पाल्ने र जीवन धान्ने भनेर ल्याएको ऋणले उनलाई सुकुम्बासी बनायो । कारण ‘पालेका सुँगुर, बाख्रा सबै रोगले मरे । ऋण जस्ताको तस्तै रह्यो । तिर्ने पैसा नै भएन’, उनले भनिन । ऋण तिर्न नसकेकी लक्ष्मीलाई विपक्षीले सिन्धुली जिल्ला अदालतमा पैसा नतिरेको भन्दै लेनदेन मुद्दा हाले । उक्त मुद्दामा अदालतले लक्ष्मीलाई हराईदियो । उनले पैसा तिर्न त खोजिन तर ३५ लाख रुपैंया पुगेको ऋण पुरै निखन्न सकिनन । जसका कारण उनको जग्गा लिलामी भयो । अदालतका श्रेष्तेदार डेढकुमार ढकालका अनुसार २ पटकसम्म लिलामी हँुदा समेत कसैले जग्गा नलिएपछि अदालतले विपक्षीका नाममा पास गर्ने निर्णय ग-यो ।
जग्गा र घर साहुको नाममा पास गरिदिने अदालतले निर्णय ग-यो । उक्त घर जग्गाको ३५ लाख रुपैंया मुल्यांकन गरियो । अदालतले फैसला कार्यान्वयन भन्दै लक्ष्मीलाई घर छोड्न आग्रह पनि ग-यो तर लक्ष्मीसँग न कुनै जग्गा थियो, न कुनै सम्पत्ति । घर छोड्न सकिनन । उनलाई सहयोग गर्ने पनि कोहि भएनन ।
शुक्रबार अदालतले घर खाली गर्न आउने भन्दै पत्र पठाएको थियो । पत्र बुझेकी लक्ष्मी दिउँसो १२ बजेसम्म घरमा अदालतका कोहि नआएपछि बजार झरिन । बजार गएका बेला अदालतका तहसिलदार डेढकुमार ढकालको नेतृत्वमा प्रहरी टोली लक्ष्मीको घरमा पुग्यो । लक्ष्मीको घरको ताला फोड्यो र उनका लगाउने, खाने, पकाउने सबै सामान निकाल्यो । जनप्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित व्यक्ति समेत नभएको बेलामा डकैति शैलीमा घर खाली गरियो । जनप्रतिनिधिले पत्तो समेत पाएनन ।
लक्ष्मीका अनुसार सामान निकाली सक्दा उनी घरमा पुगेकी थिइन तर सामान अदालतका कर्मचारी, प्रहरी कसैले उनलाई दिएनन । सामान लिन अदालत गईन । अदालतमा उनलाई कार्यालय समय सकिएको भन्दै पस्न दिईएन ।
श्रीमानले घर छोडेर वेपत्ता भएको १४ वर्ष भयो लक्ष्मीको । छोरी विहे गरेर गईन् । बस्ने घर पनि अदालतको फैसला अनुसार अदालतले नै ताल्चा लगाईदियो । न खाने बास छ, न लगाउने लुगा र पकाउने भाँडा नै छन, नत खानेकुरा, न पैसा नै । घरमा एक्लै रहेकी लक्ष्मी अहिले न बास न साथको अवस्थामा पुगेकी छिन ।
उनी सहारा विहिन बनेकी छिन । बेसहारा भएपछि उनी सिन्धुली जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको गेट अगाडि चौतारोमा शुक्रबार रातको १० बजेसम्म बसिन ।
राती १० बजे इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नबिनवावु अधिकारी र पत्रकारको टोली त्यहाँ पुग्यो र लक्ष्मीको उद्धार ग¥यो । उनलाई सिन्धुलीको सुरक्षित आवास गृहमा राखियो । शनिबार उनी केहि जनप्रतिनिधि, पत्रकार र स्थानीय सहित उनी घरमा पुगिन तर फेरी फर्केर सेफ हाउसमै आएर बस्न बाध्य बनिन ।
मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारको टोली जाँदा अदालतले कुनै सूचना टाँस गरेको पाईएन । ताला लगाईएको छ तर लाहा लगाईएको छैन । लक्ष्मीले पालेका कुखुरा शनिबारसम्म भोकै छन् । दाना पानी दिने आँट छिमेकी कसैले गरेका छैनन । किनकी अदालत र प्रहरीको टोलीले कुखुरा गनेर गएको छ । कसैले नछुनु भनेर धम्किको भाषा बोलको छ ।
लक्ष्मीलाई ‘कुखुरा लानु भनेका थिए अदालतका मान्छेले’ तर ‘कहाँ लानु बासै नभएपछि किन चाहियो कुखुरा ?’ लक्ष्मीले भनिन । ‘उनीहरुलाई नै तपाई नै जिम्मा लिनुस भनें, उनले थपिन । उनको जग्गाको मुल्य हाल चलनचल्तीको मुल्यमा ५ लाख रुपैंया धुर छ । पैसा नै नहाले पनि ४ लाख धुर हाल्छन । यसले गर्दा पनि उनको सम्पत्ति करोड माथिको मुल्यको थियो तर ३५ लाखमै साहुले खायो । अदालतले त्यहि साहुलाई सघायो । एउटी एकल महिलालाई सडकमा पु-यायो ।
अदालतका तहसिलदार डेढकुमार ढकालका अनुसार शनिबारसम्म अदालतले कानुनी रुपमा घर विपक्षीलाई बुझाएको छैन । नत सामान नै लक्ष्मीलाई बुझाएको छ । यो घटनालाई स्थानीयबासीले अदालतको अमानवीय व्यवहार भन्दै घटनालाई व्याख्या गरेका छन । तथापी ‘अदालतमा कानुनी कुरा मात्र हुने र मानवीयता नहुने’ ढकालले बताएका छन ।
चिकित्सक नै संक्रमित भएपछि त्रास बढ्यो सीआईबीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन किन भयो फिर्ता ?
छ जना कलाकार कोरोना संक्रमित, सुटिङ प्रभावित